Fiovàna. BNL Ministries - mg14
Ampahany voadika avy ao amin'ny boky "Ny Fisalasalan'i Darwin".
"Ao amin'ny Fiandohan'ny Karazan-javamanan'aina, Darwin nanaiky an-karihary fa misy lesoka goavana ao amin'ny teoriany, ary nilaza ny ahiahiny mahakasika ny lafiny manan-danja amin' izany. Kanefa ankehitriny ireo mpiaro ny fandaharam-pianarana manao siansa tokana ny an'i Darwin toa tsy te hanaiky izany, na zavatra hafa ara-tsiansa mampiahiahy momban'ny teorian'i Darwin amin'izao fotoana izao, nolazaina ny mpianatra izany. Ity boky ity dia milaza ny fisalasalan'i Darwin mavesa-danja indrindra... nahoana no zavatra tsy nety toa nitokana izay fantatr'i Darwin tamin'ny eritreriny no nitombo mba ho tonga fanoharana amin'ny olana ifotony amin'ny fiovàna biolojika (siansa momba ny fiainana sy ny zava manan'aina”.
Fantatry Charles Darwing fa nisy zava-nitranga manan-danja teo amin'ny tantaran'ny fiainana izay tsy nazavain'ny teoriany. Izay fantatra ankehitriny hoe " Fipoahana Kambriana ", 530 tapitrisa taona lasa, biby maro no niseho tampoka teo amin'ny tantaran'ny fôsily izay toa tsy misy razambe mazava tamin'ny sosona teo aloha tamin'ny vatolampy. Ao amin'ny boky Ny Fisalasalan'i Darwin Stephen C. Notantarain'i Meyer ny misitery manodidina io fipoahan'ny fiainana biby io, misitery niha-nahazo vahana, tsy ny tsy fahitana ny razamben'ireo ireo biby ireo ihany, izay nandrasana, fa koa ny mpahay siansa nahalala mihoatra ny amin'izay ilaina hanamboarana biby iray. Namelabelatra izany zavatra maharesy lahatra izany, nasehony tao amin'ny bokiny farany, sonia tao amin'ny sela, Meyer dia nanambara fa ny teorian'ny fisainana izay manamafy fa ny toetra sasany eo amin'ny tontolo iainana sy ny zava manan'aina dia voazava tsara kokoa amin'ny saina matsilo, fa tsy amin'ny zavatra tsy mivantana tahaka ny fifidianana natioraly, amin'ny farany dia ny fanazavana tsara indrindra ny fiavian'ny biby Kambriana. Ao amin'ny
Jereo www.darwinsdoubt.com (Anglisy).
Tamin'ny taona 500 Tapitrisa voalohany teo ho eo ny Tany dia planeta maty, ary niha-nangatsiaka taorian'ny Big Bang.
Nisy izany ny vanim-potoanan'ny taona 800 Tapitrisa ary ireo endrika fiainana tsotra ihany no niseho.
Ny fototry ny “photosynthesis” (fiantraikan'ny herin'ny masoandro mahatonga hazavana amin'ny zavamanan'aina) dia nipoitra teo amin'ny taona 900 Tapitrisa.
1758 Tapitrisa taona no nilaintsika ho an'ny atmosfera “oxygene” betsaka mba hiforona.
Ny fitantarana ny Fosily dia tsy naneho ny endrika fiainana misy (taorian'ny Fipoahana Kambriana) raha tsy tamin'ny farany taona 540 Tapitrisa teo ho eo. Ny endrika fiainana avo lenta dia tamin'ny faran'ny taona 100 Tapitrisa.
Ny olona dia nisy teo amin'ny taona 2 Tapitrisa.
Io zavatra nomena io dia mifanohitra amin'ny fomban'ny fiovàna izay mitaky ireo zavaboary tena sarotra indrindra hanana fotoana lava indrindra hitombony satria mitaky ambaratonga betsaka ny fahatratrarana ny fahasarotana. (fifangaroana)
Tadidio: Ny tohatry ny fotoana nampiasaintsika dia ireo voalaza fa nolazain'ny mpahay siansa.
Ny ankamaroanareo dia efa naheno ny fosily atao hoe Lucy (Australopithecus) izay hita ny taona 1974, tao Etiopia.
Izy (tsy fantatra marina raha lehilahy na vehivavy) dia noheverina fa nandeha nijoro mahitsy, ary eto dia hoe razamben'ny olombelona. Ny porofon'io dia ny firafitry ny valahany sy ny taola-tongony. Kanefa voalaza fa ny taolana sasany dia niova, ka "namboarina" avy eo. Io dia mahasahana fanapahana sy fanamboarana ny taolana mba hifanaraka amin'ny teoria. [Tena ara-tsiansa izany?] Izy dia voalaza fa manana atidoha kely, saoka tahaka ny rajako amin'ny karazany.
Misy sarin'i Lucy amin'ny plàtra miranty ao Cleveland Museum of Natural History, ary manana tongotra tahaka ny olona izy. Ilay tongotra anefa dia tsy mbola nisy nahitana azy na ovina na ovina. Noho izany io koa dia zavatra namboarina.
Ny fanazavana fanampiny momba ny “Lucy” dia ny maha Rajako (Ragidro) azy.
Ilay Piltdown Man.
Ny fosilin'ny Piltdown Man, hita ny taona 1912, tao anaty lavaka vatokely tao Piltdown, Angletera dia naseho fa sandoka ny taona 1953. Ny poti-taolana dia tsy inona fa karandohan'olona moderna (taona mediavaly), ny taolan'ny saoka avy amin'ny Orangoutang (500 taona) ary nifina rajako. Ny taolana dia nolokoina vy sy asidra kromika, mba hisehony antitra kokoa. Nisy marika nipetraka koa teo amin'ny nifiny. Nahatratra 40 taona izany lainga izany vao hita.
Ny Laingan'ny Fiovàna
Ny Teorian'ny Fiovàna.
Ny teorian'i Darwin momban'ny Fiovàna dia mizara roa.
1. Teorian'ny Fisafidianana Natioraly.
Ny Teorian'ny Fisafidianana Natioraly dia “ny fahaveloman'izay tsara indrindra”, ary io dia azo banjinina.
2. Ny Fiandohan'ny Karazana.
Ny Teorian'ny Fiandohan'ny Karazana dia vinavina ihany, fa tsy azo jerena. Io koa dia TSY voaporofon'ny zavatra omena ao amin'ny fitantarana Fosily, Io dia mila “Fitohizana Tsy ampy” anarivony maro mba ho hita, mba ho tanteraka ny Hazon'ainan'i Darwin.
Stephen Jay Gould (tsy mino andriamanitra fa mino fiovàna) nanambara: “Ny tena tsy fisian'ny endrika fitohizana ao amin'ny rakitry ny fosily dia mitohy, ny misitery ara-barotra ny'paleontology” (siansa momba ny fosily) Nohamafisiny fa ny fosily dia tsy niova nandritra ny fotoana lava, avy eo niova haingana izay tsy misy porofo ao amin'ny fitehirizana (archive) momba ny fosily.
Ny Fiovàna dia Fivavahana.
Nanambara Michael Ruse: "Ny Fiovàna dia nambara ampahibemaso fa hevitra, fivavahana laika,safidy hafa ankoatran'ny kristianisma... Izaho dia mino ny fiovàna ary Kristiana mafana fo-taloha, fa manaiky aho amin'ity fitarainana iray ity – ireo literalista [mpino baiboly], dia manana ny marina. Ny fiovàna dia fivavahana."
Tahaka ny finona an'andriamanitra dia mila finona ihany koa ny fiovàna.
(Anglisy) Disponible avy:
The Case for a Creator (Anglisy)
DVD Disponible avy:
Raha nampianarina ianao
fa ny Fiovàna no
hoe ahoana ny
Ny Soratra Masina dia Milaza...
Tamin'ny voalohany Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany.
Ary ny tany dia tsy nisy endrika, sy babangoana; ary haizina no tambonin'ny lalina. Ary ny Fanahin'andriamanitra nihetsika tambonin'ny rano.
Dia hoy Andriamanitra, Misia ny mazava: dia nisy ny mazava.
Ary hitan'andriamanitra ny Mazava, fa tsara izany: ary Andriamanitra nanasaraka ny mazava tamin'ny maizina.